कोरोना विरुद्धको खोप छिटै आउने,कुन खोप कति प्रभावकारी? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार कोरोना विरुद्धको खोप छिटै आउने,कुन खोप कति प्रभावकारी?
कोरोना विरुद्धको खोप छिटै आउने,कुन खोप कति प्रभावकारी?
२०७७, २ मंसिर मंगलवार १२:०१
अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धका दुई खोपले उत्साहजनक नतिजा देखाएका छन् । बोस्टन क्षेत्रका दुई कम्पनीहरु मोडेर्नाको खोप ९४.५ र फाइजरको खोप ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएका हुन् । सोमबार बिहानै मोडेर्ना कम्पनीको खोप ९४.५ प्रतिशत प्रभावकारी भएको खबरले सर्वत्र खुशीको सन्देश दिएको छ ।
केही दिनअघि फाइजर कम्पनीको खोपको परीक्षण नतिजा ९० प्रतिशत प्रभावकारी भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।मोडेर्नाले जारी गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकमा उसले विकास गरिरहेको खोप ९४.५ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको उल्लेख छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अनुसन्धानका क्रममा यो अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै प्रभावकारी मानिएको खोप हो ।
फाइजर र मोर्डेना दुवै अमेरिकाको मासाचुट्सेस राज्यका अग्रणी बायोटेक कम्पनी हुन् । फाइजरले जर्मनीको कम्पनी बायोएनटेकसँग सहकार्य गरेर खोपको विकास गरिरहेको छ । यी दुवै खोपका समाचारले कोरोना महामारीविरूद्ध लड्ने आत्मविश्वास संसारभर छरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
मोडेर्नाले आफ्ना लागि यो खबर निकै ठूलो र सुखद् भएको बताएको छ । यो खोप छिटै प्रमाणिकरण भई प्रयोगमा आउने उसको विश्वास छ । मोडेर्नाले ३० हजार मानिसमा यो खोपको तेस्रो परीक्षण गरिरहेको छ । मोडेर्नाका अधिकारीहरुले आफ्नो कम्पनीले विकास गरिरहेको यो खोपको नतिजा ९५ प्रतिशत हाराहारी होला भन्ने आशा गरेका थिएनन् । सोचेभन्दा राम्रो नतिजा आएपछि कम्पनीका उच्च अधिकारीहरु छक्क परेको बिबिसीले जनाएको छ ।
अब यो खोप अमेरिकी सम्बद्ध निकायबाट अनुमति पाएपछि सरकारी च्यानलमार्फत् छिटै प्रयोगमा आउने उसको विश्वास छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरुले पाउने छन् । मोडेर्नाको खोपले अनुमति पाएपछि सुरुमा अमेरिकामै यसको प्रयोग हुनेछ । त्यसका लागि कम्पनीले दुई करोड खोप छिटै तयार गर्दैछ ।
अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले पनि मोडेर्ना र फाइजरका खोपको सफल परीक्षणलगत्तै आगामी केही साताभित्रै यो खोप लगाउन थालिने बताएका छन् । मोडेर्नाले संसारभरका देशका लागि करिब १ अर्ब खोप बनाउने योजना छ। हाल संसारभर करिब १४० खोपको परीक्षण चलिरहेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउँदै आएका र अहिले उत्कृष्ट नतिजा देखाएका खोप मोडेर्ना र फाइजर कम्पनीका नै हुन् । यी दुवै कम्पनीलाई कोरोना विरुद्धको खोप अनुसन्धान तथा विकासका लागि अमेरिकी सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
Previous articleहङकङमा भयानक आगलागीः बागलुङे सहित ७ जनाको मृत्यु
Next articleनेकपा स्याङ्जा अध्यक्ष पारसकी छोरीको अरिङ्गालले चिल्दा मृत्यु